NgoNovemba, 2018 ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS
Xa sibona ukusebenza ArcGIS Campus Smart kunye imisebenzi ezifana iindlela zokuhamba phakathi edesikeni kumgangatho wesithathu kwesakhiwo Iinkonzo zobungcali omnye Q Auditorium, ngenxa zombini lizwe elingaphakathi nokumanyaniswa data BIM, sifumana Ukuhlanganiswa kwe-Geo-yobunjineli engena kumbono obophayo kusondele kakhulu.
Kwaye ngaphandle kwento yokuba kukho imisebenzi enzima eshiyekileyo yokugcina indlela yolawulo lwedatha (MDM) yenyani yenyani phakathi kwenyani yokukhanya kwe-GIS, inyani ye-BIM eneenkcukacha kunye neziganeko zesicelo kubomi bokwenyani obuhamba kwesi sikhombisi. Sikwabona ukuba yonke le nto isebenza kwizikhangeli zewebhu, kunye nePython yenkqubo kodwa ngakumbi ngolwimi njengokukhanya njengeJavacript.
Okokusikhumbuza ngokuqinisekileyo, ukuba i-geomatics kunye neenjineli kuya kufuneka ihambe inyathelo elongezelelweyo ukuqonda imodeli, kunye neeprogram zokubhala.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukutshintsha kwemeko ukusuka kwimeko enzima yedesktop ukuya kwizikhombisi zesikhangeli esincinci. Ngokuqinisekileyo isazinzulu sekhompyuter esenza ubugcisa nge-GIS server, i-Gis Injini okanye izinto ze-Gis zaphuma zishishina xa ibona indlela iLeaflet esebenza ngayo kwikhosi ImephuGi; Andiyi kukumangaliswa ukuba uya kuthungela ingcwaba kumcebisi wakhe wangaphambili.
Ababonisi be-webinar baqala ukubonakala benekhonkco elungileyo kumxholo wokusebenzisa i-3D kwizicelo ze-ArcGIS, kunye nendlela ezibonakalisa ngayo kumaqonga e: Umbukeli wesigcawu, iimephu zamabali, okanye umakhi weWebhu App ngokuxhomekeke kwinjongo yesifundo.
Kwakubalulekile ukuba iikhonsepthi ezisisiseko ezinxulumene nesihloko se-3D zichazwe kwasekuqaleni, ngakumbi kuba ngaphaya kokubonisa imiqulu, ifuna ukulinganisa iinkqubo. Umba osabalulekileyo ngokweemfuno zenkqubo esisiseko yokuqhuba iinkqubo ezinxulumene nolu hlobo lwedatha eyahluke ngokupheleleyo kwi-2D, njengekhadi eliligrafu elilungileyo, inkxaso ye-OpenGL efakwe kwisikhangeli w / WebGL.
Ukuba akunjalo, makabatshelwe ngabahlobo UMSEBENZI, kwixesha elihle kakhulu lolawulo lwee-asethi kwi-technologies ye-GIS, enezithintelo phambi kweenguqu ze-OpenGL zeakhadi zegradi ze-Nvidia zaseYunivesithi apho zaphuhliswa khona. Ukonyuka okubonakalayo koqhanqalazo lwabafundi baseBogota olwenza ukuba kube nzima ukwenza uvavanyo olwaneleyo kusuku olungaphambi kwalolo.
Ukongeza, baveze ukuqaliswa kwenkxaso yokusebenzisa isixhobo kwizixhobo eziphathekayo ezifana neesefowuni okanye iipilisi.
Uyilo loyilo lohlobo lwe-4.x kwaye lwenziwe ngezinto ezibonakalayo kunye namawijethi, ukongeza ekwamkeleni uluhlu oluninzi lolwazi oluvela kwimithombo eyahlukeneyo yedatha. Olu lwakhiwo lugqwesa ngaphezulu kwe-3.x kuba ukubonwa kwe-3D kufumaneka kuphela kweli nqanaba. Izixhobo zeWebscene kunye ne-SceneView zisetyenziselwa ukulawula idatha ye-3D kwaye zidityaniswe ngokupheleleyo kwi-API, ukongeza kwindlela yokwenza imodeli ye-3D enokulungelelaniswa nedatha ekhoyo kwizicelo zangaphambili.
ehamba phambili, evumela ukujikeleza kwekhamera kwindawo yokusebenzela.
Kuye: isetyenziselwa ukuseka imbono ngokubhekiselele kwinto ofuna ukuyifumana kwi-3D, kunye kunye unokwenza iziqulatho kunye nesi sixhobo, ezifana nokubeka iidridi ezithile ehamba phambili ukuphinda uphinde ujikeleze imifanekiso.
I-ToMap: ithatha ulungelelaniso lwembono kwaye uyibeka kwimephu ye-2D
kwiSkrini: ikuvumela ukuba ubonise inqaku kwi-2D imephu kwaye uyibeke kamva kwimbono ye-3D
Uthi: isetyenziselwa ukuchonga iimpawu apho inqaku elithile linalo ngombono
Kwakhona kuchazwa ukuba ulwakhiwo lwe-3D Imaphu izixhobo ezifanayo ukudala enye 2d, ezifana nokusebenzisa basemaps, umaleko okanye oomaleko kwakhona inkxaso ukuba 2D (WMS, zithwala okanye CSV).
Nakuba kunjalo, kufuneka uqaphele ukuba 2D maleko eziqulathe ulwazi "Z" (ubude), nto ke leyo ebangele ukuba kuyimfuneko kukhombisa idatha enxulumene ne 3D babe zomaleko nanjengokuba ngamafu amanqaku, mahlayat abaphakamileyo. Ngaphakathi API uyakwazi udibane kwi ezi zoleko 3D ezifana amanqaku ukuphakama ngqo phakathi kwamehlo, kumfanekiso (1) intsimi ekuqaleni waphawula, kunye nomfanekiso (2) njengoko uziguqule umbuzo okanye uthathethwano.
Babonise imizekelo emininzi yendlela idatha emelwe ngayo, umzekelo, yeyiphi idatha exhaswa yi-SceneLayers (amanqaku) kunye nezinto ze-3D (izinto ze-3D).
Kwizixeko ezikhulu, ukumelwa kwezinto ze-3D sisixhobo esinamandla, kuba kunokwenzeka ukubona, kungekuphela nje indawo yendawo yento, kodwa umthamo wayo, ubudlelwane nemo engqongileyo, kunye neempawu zangaphakathi zazo nganye inokongezwa. izinto. Lo mfanekiso ulandelayo ubonakalisa indlela abasikhethe ngokungakhethiyo isakhiwo kwisiXeko saseNew York, kwaye zonke iimpawu zaso ziyabonakala. Kwangokunjalo, imibuzo emininzi inokulungiswa ngokwamacandelo, anje ngala: apho izakhiwo ezithile zinoluhlu oluthile lokuphakama okanye inkcazo yeendlela ezifanelekileyo ezikhoyo
Uncedisa ukuphathwa kweendlela ezifana UmdibanisiMayLayer, eyona ibhloko yolwazi kwiinzwa ezifana ne-drones. Azinalo ulwazi oluzimeleyo lwesakhiwo ngasinye njengemifanekiso yangaphambili, kodwa ubuninzi beenkcukacha ngeempawu ze-3D.
Ke ukuba amafu ingongoma, uyakwazi ukudlala ubungakanani amachokoza ukuze ufumane uluvo olungcono data, ekubeni umaleko ingongoma nganye kunokuba zizigidi amanqaku data, kodwa ezingamelwanga njenge into 3D ngokwayo.
Bachaze ukusetyenziswa kwesimboli kwidatha ye-3D, ethiwe thaca kwimilo ethe tyaba / ethe tyaba, kunye nophawu lomthamo olunxulunyaniswa nezinto ezenziwe kwi-3D. Oku kunokuba kwizitayile ezithile ngohlobo lwento. Babonisa ukusetyenziswa kwezinto ekuthiwa zii-Extrudes "ukufaka umbala" kulwakhiwo ngokweempawu zalo,
Iindidi zokunikezela ezingasetyenziswa ziboniswe: elula, apho zonke izinto zinomqondiso omnye, i iValueRenderer apho ungahlula khona izinto, ngokwempawu, kunye IClassBreakRenderer apho iimpawu zento nganye zigcinwa ngokubhekiselele kwiklasi: kulo mzekelo babonisa ukuba ubude buni kwisakhiwo esithathayo ukufikelela kwinkqubo yokuthutha kawonkewonke.
I-widgets ye-3D: kunye nomboniso obenxibelelanayo babonisa umgama phakathi kwezinto, zombini ngokuzenzekelayo kunye kunye.
Ukwakhiwa kwezicelo: ukusuka kwindawo kunye nezinto ze-3D.
ImoyaView imodi yesimo: ichaza umxholo kunye nesitayela sombono we-3D kwaye ingalayishwa kwi-Portal ye-ArcGIS.
Imilinganiselo yeGeodeic: ingagxininise kuphela kwiimpawu zomhlaba, kodwa ivumela ukuba ulinganise umgama kwihlabathi.
izicelo Building, ebonisa 3D ngangebala leyinene thaca, imigca okanye amaqamza umnxeba apho iimpawu ezithile kuboniswe, ezifana egama ukuba kumaqonga afana Google Earth, kulo mzekelo 3D
Declutter: ukuze izenze okanye iilebhile lokucoca okanye iimpawu ezifunwa ukulibona kwi 3D kwimaphu, ngaloo ndlela sikuphephe eninzi iilebhile ukuba asivumeli nokuthelekelela efanelekileyo, kwaye ibangele ingxolo xa zokufumana into ethile.
Yakha i-Layer Layer
Igajethi yesiqendu: leyo iya kudlulisela ulwazi oluyilwe ngaphambili kwinto ye-3D
Ukulayisha ixabiso elikhulu leenkcukacha: kungekuphela nje ukuhambelana kwisixeko esithile, kodwa kuzwelonke (ilizwe).
Ukupaka iifayile zefayili
Iminikelo yale webinar ukuya kwi-geoengineering
Ngamafutshane, isifundo sisebenza ngokufanelekileyo; ukukhumbula ukuba iindlela eziya kumaDijithali amaDijithali kunye neziXeko zeSmart zifuna ukuba, ngaphaya kokucinga ngolawulo lolwazi, olungumzekelo wabo ogqwesileyo, ukudityaniswa kwendlela yokusebenza kusonjululwe. Imakethi ibanzi, iyathembisa kwaye ukuza kuthi ga ngoku sele inezisombululo ezininzi phantse zokujikajika zomsebenzisi wokugqibela; nangona kuthi abo basebenzisa itekhnoloji ukwenza izixhobo ezingasetyenziswanga, indlela isenzima. Oku kuthetha, ukuguqula eminye imilinganiselo efana nexesha, indleko kunye nomjikelo wobomi weenkqubo; hayi kwinqanaba ledatha kunye netekhnoloji, ethi, njengoko sinyanzela, ngumba ocacileyo, kodwa endaweni yoko kubuhlungu obuncinci kwizenzo zobomi bokwenyani zomsebenzisi phambi kwabalamli kwikhonkco lokuthengiselana elidlula kulwazi lomhlaba. Ukusuka kwicala le-ESRI, ukwakhiwa kwedatha kunzima, kuba nangona ungadibanisa idatha ye-BIM eyakhiwe ngaphezulu kweRevit, isabonwa njengamazwe amabini ahlukeneyo afuna inguqu entsonkothileyo. Imisebenzi emitsha ngokuqinisekileyo iya kuba nakho ukusetyenziswa kwiimodeli ze-BIM, kodwa kukho isixa esigqithisileyo solwazi lwe-CAD ekufuneka luzisiwe kwiimeko zangaphakathi, ezinezithuba zepoligoni, ukuphakama kunye namanqanaba aqhelekileyo kusabiza.
Nangona kunjalo, ukuba u-Esri ufanele ikhredithi, yinkqubela phambili ekubonakaleni nasekuboneni ngokulula. Ndiyacinga ukuba ukuphoxeka kukaDon Jack, kunye nokukhanya kwakhe kwe-«masenze kube lula» iinkokheli zemigca ethe nkqo ye-AutoDesk, kuloo mtshato usemva kodwa uphumelele apho «phantse isicelo se-ArcGIS Pro»Kufuneka ufumane phantsi kwamashiti njengesihlangu esineziqwenga ezininzi ezalatha kwinto enye kodwa kubenzima ukwenza lula umongo wesiphumo sokufuna ubume bendawo, ubuNjineli bezoShishino, ubuNjineli boLuntu kunye neZakhiwo. Kwaye ukuba imeko yokulula kwemephu yobugcisa i-GIS ehluphekileyo, kusafuneka ifunyenwe yi-CAD yesiqhelo, ngenxa yalo mkhwa wokulibala ukuba icebo leliphakathi kuphela, kodwa into ebalulekileyo kukuba ulwakhiwo lusebenze.
izenzo Good modeling GIS, ayisindi, swi ukutsalwa bunyaniso kuya kuba luncedo CAD / BIM gqith, nto leyo okwexeshana kuya kufuneka uphile ngenxa yokuba ukwamkelwa BIM kumazwe amaninzi uya ixesha elide, ingakumbi imithetho ineptitude Amagosa akhulileyo adlala kwiibini zokuqala ezimbini ze-AECO.
Ezi zifundo ezithile esizicebisayo ukuba zigcine zihlaziywa, kumaxabiso athile.
I-ArcGIS Pro-Funda ngokulula!Golgi Alvarez, AulaGEO AcademyI-ArcGIS Pro yinto entsha yeArmMap€ 199.99€ 129.99 3.7 (ukulinganisa kwe-47)
I-Bestseller I-Nuxt.js -Vue.js kwiiSteroidsYakha iiVapps zeJS ezibandakanya kakhulu iNuxt.js. I-Nuxt yongeza lula ukuhanjiswa kwecala kwiseva kunye nendlela esekwe kwifolda.€ 139.99€ 94.99 4.6
Post edlulileyo«Ngaphambilini Skrill -enye indlela yokuhlawula i-Paypal
Post Next Indima ye-geotechnologies ekuhambiseni i-3D CadastreOkulandelayo »